Izindaba ezishaqisayo mayelana nokufa kukaJeanne Friske zaholela ekuhlaleni kwamagama okududuza ezinkampanini zenhlalo zezinkanyezi eziningi. Ngaphansi kokuthunyelwe komunye nomunye isithombe sikaJeanne, okwamanje kuze kube namuhla siqhubeka nokuhlanganyela abadumile, abalandeli bezinkanyezi babhala ngokuhlupheka kwabo. Kodwa kuvele ukuhlukunyezwa okungajabulisi phakathi kuka-Anita Tsoi nabalandeli bakhe ku-Instagram singer. Abhalisile bahlambalaza ngokukodwa okunye okuthunyelwe kuka-Anita futhi "bahlonipha" inkanyezi ngokuhlaselwa okuhlambalaza.
Njengabo bonke osebenza nabo esitolo, u-Anita Tsoi akazange aqhubeke enganaki ukulahlekelwa okwedlule futhi waveza induduzo emndenini kaJoanna Friske embikweni wakhe we-microblogging.
Ngosuku olufanayo, u-Anita Tsoy naye wabelane nalabo ababhalisile ezinye zezimfihlo zokulungiselela iphrojekthi entsha ngokuphelele ngethimba elithakazelisayo futhi elihle kakhulu. Sebenza kulo msebenzi, njengoba kuboniswe yizindaba zakamuva ezivela ku-star star, zithathwe ngokuphelele. Kungakhathaliseki ukuthi abalandeli bazama ukuthola okungenani imininingwane ethile, u-Anita Tsoi usalokhu ehlaba umxhwele, yiyiphi indima entsha ezovela ngaphambi kwezilaleli zakhe:
Sisebenza ngamandla okugcwele ☺. Kodwa kanjani enye? Le phrojekthi intsha, iyathakazelisa ... Kufanele ngifunde okuthile ekuhambeni, kodwa ngandlela-thile anginalo elilinganayo.
Ividiyo ye-discord ebhukwini lika-Anita Tsoy
Futhi manje, ngaphansi kwevidiyo engenacala ka-Anita Tsoi, nekhefu lakhe elincane emisebenzini engaphezu kwamahora angu-10 kulo msebenzi, izinkulumo ezithandayo zabalandeli ziphelile. Iqiniso liwukuthi ngemizuzwana embalwa umculi, elele embhedeni, ephakamisa ukhathele nezinyawo ezithukuthele, ehleka ikhamera.
Ukuziphatha okunjalo okujabulisayo nabhalisile abacasuliwe:
ukuthembeka, ngidumala ku-Anita ... Ngosuku olunjalo futhi ngibonise injabulo enjalo ... Awukho amagama nje
Kule vidiyo, umuntu ulala futhi ahlasele ... Futhi ngaphambi kwalokho amahora ambalwa edlule, njengokulila ... Umdlalo emphakathini
Wena, u-Anita, kungenzeka ujabule lapho, kodwa ungabonisi emhlabeni wonke!
yeka ukuthi uyisiphukuphuku kanjani kuwe ... Ukudumala ngokuphelele kuwe ... Uma uzobe usenkonzweni yesikhumbuzo eCrocus City, yilapho kuphela sicela, ungazami ukuhleka ngokujabula ...
Ngokungafani nezinkanyezi eziningi ezingenzi inkhulumomphendvulwano nabangabhalisile, u-Anita Tsoi akazange aphendule kuphela ukuhlambalaza okuhlambalazayo, kodwa futhi wayengenabuvi kakhulu ukuvakashela iphrofayli yabalandeli abaveze ukuthukuthela ngokuziphatha kwakhe okungenacala. Futhi inkanyezi yabhala ukuhlaselwa hhayi nje nge-prose, kodwa ngemigqa ejulile enemibuzo:
Isihloko sokuthi ngibuyiselwa kanjani umzimba okhathele (kuleli cala imilenze yokuvuvukala) ngokushesha futhi ngokuphumelelayo kubangele ukusabela okubi okunonya. Kungani? Ingabe lokhu kuhlangene noJeanne? Noma ucasula isithunzi somculi noma umndeni wakhe? Izigidi zabesifazane zichitha amazambane amahora amaningi futhi zihlushwa i-edema nokukhathala kwezinyawo. Ngicabanga ukuthi kuyimfanelo yami yokwabelana ngesigamu esikhulu somuntu iresiphi enhle yobuhle nempilo.
Isikhundla sami ukuthi bangamemeza kakhulu ngothando. Ubani odingayo, uzongilalela.
Abakhulumi banikwa yesikhulumi sezinkulumo. Abaculi - umculo nomcimbi wokuhlengwa. Ngizokhokha kule ngoma, futhi ngizokhuleka, futhi ngizokhamuluka ngalokho engikuphilayo, ukuthanda phansi, ngingenakho ukuzenzisa! Ukumamatheka kwami ​​nokuhleka okukhulu, njengeNSELELE kulabo abaqeda ukugubha e-coma. Kuye impilo inikezwa eyodwa YONKE YONKE, KUYONKE futhi sizoyiphila ngaphandle kokungabaza!
"I-Blue Light 2016": izithombe ezingavamile kusuka kusethi
Esikhathini esithi "Isiboniso" somdlali we "Leningrad" wasePetrograd
Konke NgoJessica Alba: Kungakanani Ukugqoka, Ukudla
Ubuhle bemvelo buka Natalia Vodianova bangela ukukhwabanisa ku-Instagram
U-Ekaterina uBarnaba waqeda umshado womunye, ividiyo
U-Tina Kandelaki ufuna izigumbane endaweni yokuphola
Izinwele zezinwele zasebusika eziphezulu ze-Top-4 zingu-2016-2017
Kuyoba yini unyaka wezi-2018 Izinja Ze-Sagittarius
Uhambo oluzungeze inhloko-dolobha yaseFrance. Ingxenye 1
I-Asia Beauty SPA inikeza
Ingaphakathi nezibonakaliso ze-zodiac
Isoso sekhukhi elimnandi
Ukwelashwa kwamakhambi omuntu we-dyspnea
Ngingalala kanjani ngokushesha, ngisebenzisa amakhambi abantu
I-home dinosaur yami
Kungani kufanele uphuze i-magnesium B6 ngesikhathi sokukhulelwa?
Ukumisa amafutha: imenyu yabesifazane yokumisa umzimba